ခရမ်းသီး အုမ္မလက် Omelet ~ စန္ဒကူး
အတော်ဘဲ ခရမ်းသီးဆို သိပ်ကြိုက်တာ လုပ်စားကြည့်ဦးမယ် .. :))
Ku ku yae..lar lae tae naw..Hinn ta myo toe thwar b...loat sar kyi ohn mae..
ဟုတ်တယ်နော် ကူးကူး အဲလိုလေးကြော်စားတာ အရမ်းကြိုက်တယ်။ စိမ့်စိမ့်လေး။ စားတောင်စားချင်လာပြီ
ခရမ်းသီး ၂ လုံး ၀ယ်ထားတယ်။ စမ်းလုပ်ကြည့်ဦးမယ်။ ကျေးဇူးပဲ စန္ဒကူးရေ ... ။
တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး... စမ်းကြည့်အုန်းမယ်
တခါမှ အလိုတော. စားဖူးဘူး စာကြည်.ချင်မိတာတော.
အမှန်ဘဲဗျာ ... :)